Ndeupi musiyano uripo pakati pe RAM, ROM, uye chengetedzo yemukati? Em ➡️ Emulator.online ▷ ➡️
Ndeupi musiyano uripo pakati pe RAM, ROM, uye chengetedzo yemukati?
Ndeupi musiyano uripo pakati pe RAM, ROM uye yekuchengetera kwemukati?. Iyo smart phone , que anotakura en homwe yako ine ndangariro uye chinhu ichi chinofanira kucherechedzwa nhoroondo pakutenga. Asi iwe unoverenga mazwi Chemhondoro RAM, ROM, zvemukati mune ads. Ndedzipi mhando idzi de ndangariro? Izvo zvinonyanya kukosha pakutenga un smartphone? Ngatitaurei nezvevose maintenant.
ngo> Chii chinonzi la RAM?
RAM ndiyo iyochisingaperi Ruzivo Rwekusvika, chii chiyeuchidzo che kupinda random muchiSpanish. Sezvinoreva zita rayo, inoshanduka-shanduka, haichengete ruzivo senge memori kadhi, sedhiraivhi rakaomarara, sedanda re USB. Ndeyechinguva uye ruzivo rwese rwuri mariri rwakarasika kana magetsi adzimwa kana mune mamwe maitiro
Asi ndozvazviri nokuti chinangwa chakanaka, uye zvakakosha kuti mafoni edu (uye kunyangwe emakomputa, malaptop uye zvimwe zvigadzirwa zvemagetsi) zvinoshanda nemazvo uye nemazvo. Mukati memidziyo, pane iyo epanyama ma module anoshandiswa sekutanga ndangariro.
kubudikidza Kazhinji ruzivo rwechinguva chete runochengetwa mu RAM iyo iyo smartphone inoda chero nguva yakapihwa, senge inoshanda sisitimu kana all mafomu kuvhura (kunyangwe nechekumashure) iyo inoiswa mu RAM kana chishandiso chatanga.
Huwandu hwe RAM hunokanganisa iyo huwandu hwekuwandisa iwe unogona kuita pane mudziyo. Iyo yakawedzera RAM, iyo yekuwedzera kwenguva pfupi ndangariro iyo foni yako yaanofanira kubata data. Icho chokwadi chekuti chisina kujairika zvinoreva kuti chishandiso chinogona kuverenga uye nyora nezvake mukati chero chinzvimbo chisina have kumirira mutsara wekuita. Izvi zvinomhanyisa kutsvaga kweruzivo kubvira, kusiyana nendangariro ROM kana microSD, zviri nyore kwazvo kuwana iyo yepanyama nzvimbo iyo iyo data yakachengetwa.
Iyo RAM ndangariro inotakura zvese izvo zvinonyanya kukosha kuti mudziyo ushande, ndiko kuti, iyo sisitimu inoshanda, zvinoshandiswa mukushandisa uye izvo zviri kumhanya kumashure. Sekushandisa kutsva kwesystem uye matsva ekushandisa zvinokumbirwa nguva dzese, kukurumidza ndangariro kunodiwa, uko kunogona kunyorwa chero nguva pasina kukanganisa ruzivo rwakakosha.
RAM inoshanda chete kana chishandiso chakavhurwa. Ndokunge, iyi mhando yekurangarira haigone chitoro ruzivo kana chishandiso chadzimwa (kana bhatiri rapera). Ndicho chikonzero nei zvichikosha kumirira chinguva kana tavhura iyo smartphone, sezvo zvichidikanwa kubvumira nguva yekuti iyo system irongedze iyo RAM. Ipapo tinoona iwo maficha pamusuwo.
Chii chinonzi ROM memory?
RAM ndangariro dzekuverenga nekunyora, asi ROM ndangariro yekuverenga ( ndangariro yekuverenga chete ). Dhata rakachengetwa muROM harisi anogona shanduko, kana zvirinani kwete nyore kana nekukurumidza.
Iyo mhando yeyeye-isina kugadzikana ndangariro, ndokuti, iyo data inosara kunyangwe muchiitiko chemagetsi kukundikana kana kana chishandiso chakadzimwa. Kuwana ese ekurangarira maseru kunotora yakaenzana nguva (kusiyana nemadhiraivha akaomarara), saka data rekushandisa rinowanzo chengetwa mukati meROM kuti ive nechokwadi chekutanga nekukurumidza uye kudzivirira shanduko dzinoitwa nevatyairi. Vashandisi.
DVD kana CD
Zvisinei, iyo Zvemukati zveROM zvinogona kuchinjwa muzviitiko zvakakosha. MaDVD kana maCD ndiwo muenzaniso weROM asingakwanise kukwidziridzwa, nepo koni ine ROM inogona kukwidziridzwa.
Iro ROM mune zvekare mafoni emafoni aishandiswa kuve nezvikamu zveiyo system Android (system, providers, semuenzaniso) kudzivirira vashandisi kubva mukudzima kana kugadzirisa mafaera mukati mayo. Uye ndipo pakajairwa tsika maROM, nekuti akaiswa mundangariro kungoverenga mafoni.
Kunyangwe nanhasi, pane maitiro ekunodana system partitions ye smartphone game iro zita, kunyangwe hazvo, nehunyanzvi, ndangariro mune izvi zvikamu hazvisi zveROM mhando.
MaROM akasungirirwa mumafoni efoni anomhanya zvakanyanya kupfuura ayo ari echinyakare makomputa akaomarara anotyaira uye anotengeswazve akananga kubhodhi reamai.
Chii chinonzi memory yemukati (kuchengetedza)?
Chekupedzisira, isu tine iyo ine zita rakasiyana kwazvo. Iyo yemukati ndangariro yeiyo smartphone inogona kuve iyo eMMC (Yakabatanidzwa MultiMediaController) kana UFS (Yese Flash Flash Kuchengeta). Mune zvimwe zviitiko, inogona kuwedzerwa uchishandisa microSD uye iine mushandisi data senge Fotos, mavhidhiyo, mimhanzi, zvinyorwa uye data rekushandisa.
Icho chiyeuchidzo chechigarire uye ini handizive perderá paunodzima chishandiso. Uyezve, inogona kungogadziriswa nemvumo yako semushandisi. Pane mafoni, iko kushandiswa kwe ROM iyo yakatsiviwa nezvikamu zvakatsaurwa pane zvemukati ndangariro (eMMC kana UFS) yakagadzirirwa nzira yekuverenga-chete kuburikidza nesoftware.
Uye ndiko kuyeuka kwemukati uko, mune smartphone kana kunyangwe mune zvimwe zvigadzirwa zvemagetsi, kunounza iyo yepamusoro nhamba, parizvino iri GB. Ipo iyo RAM yeiyo smartphone yakawanzosvika yakakwira ye 8 GB, ndangariro yemukati yatosvika panhamba senge 256 GB.
Zvakare, nepo iyo RAM iri mu-smartphone isingakwanise kuwedzeredzwa mushure mekugadzirwa kwechigadzirwa, ndangariro yemukati inogona kuwedzerwa muzviitiko apo mudziyo une memory kadhi, iyo microSD. Nezvo, mafoni emafoni anogona parizvino kusvika 1 TB yenzvimbo yekuti sisitimu ishandise uye kuti igone mafaera ako.
Ko Android neIOS vanobata RAM zvakasiyana here?
Android mushandisi kazhinji ndiye munhu anowanzoda kuwedzera uye nekuwedzera RAM yehurongwa hwavo. Zvichakadaro, kune iOS, mazuva ano, nemaPhones anotumirwa ne3GB ye RAM. Asi sei? Kushandiswa kwe RAM uye manejimendi pane ese ari maviri masisitimu anoshanda akafanana uye anoshanda, aine musiyano wakakura munzira iyo papuratifomu yega inosarudza kushanda pane ekushandisa ekumashure.
Ipo Android (Linux-based) ichisarudza kuuraya app kumashure kana memory iripo inosvika pamuganhu wayo wekusunungura nzvimbo ye itsva app, iOS inogona kumanikidza yakawanda data kubva kune maapplication anomhanya kumashure achienzaniswa neApple padanho rehurongwa uye unoguma uchipa kurodha mamwe maapplication kusvikira iwe waapedza.
Ehezve, pane musiyano mukuru muzvishandiso pachavo pachikuva chimwe nechimwe uye isu tinoziva izvozvo. Nepo mashandisiro eIOS angave akaomarara nekuti vanomhanya papuratifomu vanobudirira vega, maApplication Android iwo ane rumwe ruzivo kuti vakwanise kuitwa zvinobudirira.
Usavhiringidze ROM neyemukati ndangariro zvakare
Dzimwe nguva, kuti zvive nyore, tinotaura nezve ndangariro ye smartphone nemazwi akadai "X"GB ye RAM uye"YY"GB yeROM. TeOerically, izvi hazvina kunaka. Tinofanira kuti "X"GB ye RAM uye"YY"GB yekumusoro kwendangariro, iyo imwe GB yakachengeterwa hurongwa.
Izwi rekuti ROM, mune ino kesi, harina chokwadi nekuti iyo Android system zvikamu zvinogara pane iyo mismo Chip eMMC kana UFS pane memory yemukati (iyo inogona kuverengerwa zvakasununguka kana kunyorwa), asi iyo yekutanga inotsanangurwa sekuverengwa-chete nesoftware. Rangarira:
RAM Izvo zvinobatsira kune yako smartphone kurodha iyo inoshanda sisitimu uye ese mapurogiramu uye zvinoshandiswa zvaunoshandisa, kugadzirisa iyo multitask uye nekukurumidza kweshanduko shanduko;
Mumunda weiyo smartphone, iyo ROM inoratidza nzvimbo yekuchengetera yakachengeterwa zvimwe zvikamu zvegadziriro yakagadzirirwa mamiriro ekuverenga chete;
Yemukati ndangariro ndiyo imwe yaunogona kuchengeta zvese zvako zvemukati pachedu, uye nekuwanda kwenzvimbo iripo, inowedzera mifananidzo, mavhidhiyo uye zvinoshandiswa unogona kuchengeta pane yako smartphone.
Ndinovimba chinyorwa ichi chajekesa zvimwe zve kusava nechokwadi pamusoro pekurangarira kweiyo smartphone. Kana uine chero mibvunzo, ndokumbirawo utibvunze saber mune zvakataurwa pazasi uye tichaita zvatinogona kuti tizvipindure.
Iwo akanakisa eApple maapplication enguva
Sei kugadzira hurukuro yeWhatsApp newe kuita kuti hupenyu hwako huve nyore?